Terms uye Mamiriro | Crypto Gator | Iyo Yakanakisa Cryptocurrency, Blockchain uye Forex Nhau Aggregator
Isu tinochengetera kodzero chero nguva ku:
Chero shanduko dzatinoita kuMitemo neMamiriro zvichange zvichishanda nekukasira mushure mekutumira yakashandurwa Mitemo neMamiriro paCryptoGator.co.
Zvese ruzivo uye zvimwe zvirimo zvinoratidzwa pa, zvinopfuudzwa kuburikidza, kana zvinoshandiswa zvine chekuita neCrypto Gator Sites, kusanganisira semuenzaniso, kushambadza, madhairekitori, magwara, zvinyorwa, maonero, ongororo, zvinyorwa, mifananidzo, mifananidzo, mifananidzo, mifananidzo, odhiyo clip. vhidhiyo, html, sosi uye chinhu kodhi, software, data, kusarudzwa uye kurongedzwa kwezvambotaurwa uye "kutarisa uye kunzwa" kweCrypto Gator Sites (pamwe chete, iyo "Zvemukati"), zvinodzivirirwa pasi pemakopirita anoshanda uye zvimwe zvine chekuita ( kusanganisira asi kwete kuganhurirwa kuzvivakwa zvesimba) kodzero uye inzvimbo yehungwaru yeCrypto Gator, nemakambani ayo akabatana, marezinesi uye vanotengesa. Crypto Gator anoshingairira kuchengetedza kodzero dzayo kune Zvemukati kusvika pakazara mutemo.
Iwe unogona kushandisa izvo Zvemukati online uye chete kune yako wega, isiri-yekutengesa kushandiswa, uye iwe unogona kurodha pasi kana kupurinda imwechete kopi yechero chikamu cheChinhu chako chako pachako, chisiri-chishandiso chekushandisa, chero iwe usinga bvise chero chiratidzo, copyright kana chimwe chiziviso chiri mune Zvemukati zvakadaro. Iwe haugone, semuenzaniso, kudhindisa zvakare zvirimo pane chero Internet, Intranet kana Extranet saiti kana kuisa izvo zvirimo mune chero dhatabhesi, kuumbiridza, dura kana cache kana chengetedza izvo Zvemukati zvemagetsi fomu pakombuta yako kana nhare mbozha kunze kwekunge zvabvumidzwa zvakajeka neCrypto Gator. Iwe haugone kugovera chero cheChipiri kune vamwe, kungave kana kwete kubhadhara kana kumwe kufunga, uye haugone kushandura, kuteedzera, furemu, kubereka zvakare, kutengesa, kutsikisa, kuendesa, kuratidza kana neimwe nzira kushandisa chero chikamu cheChinhu, kunze kwekuti inobvumidzwa neMitemo neMitemo kana nekuchengetedza mvumo yakanyorwa yakanyorwa yaCrypto Gator.
Izvo zvirimo zvinosanganisira logotypes, trademark uye sevhisi mamaki (pamwe "MaMaki") ane epaBargains Nhasi Online Chitoro Ltd., uye maMaki ane vamwe vanopa ruzivo uye vechitatu mapato. Semuenzaniso, "Crypto Gator" chiratidzo chakanyoreswa che eBargains Nhasi Online Chitoro Ltd. Hapana mamaki angashandiswa nenzira chero ipi kunze kwekunge abvumidzwa pamberi, mukunyora ne eBargains Nhasi Online Chitoro Ltd.
Zvikumbiro zvekushandisa zvirimo kune chero chinangwa kunze kwekutenderwa muMitemo neMamiriro zvinofanirwa kuendeswa support@cryptogator.co.
Crypto Gator inoremekedza huchenjeri hwevamwe. Kana iwe uchidavira kuti basa rako rakateedzerwa nenzira iyo inosanganisira kutyora kodzero kana kuziva chero chinhu chinokanganisa chakaiswa nechero munhu wechitatu paWebhusaiti, ndapota nyorera wedu akasarudzika copyright mumiririri, mukunyora, neemail ku support@cryptogator.co
Attn: Copyright Mumiriri, uye upe ruzivo runotevera sezvinodiwa neInternet Copyright Kukanganisa Mutoro Wemutemo Mutemo weDhijitari Millennium Copyright Mutemo, 17 USC Chikamu 512 (c) (3):
Iyo ruzivo, zvigadzirwa uye masevhisi pane eCrypto Gator Sites anopihwa pane zvakanyatso "sezvazviri," "zviripi" uye "zviripo" hwaro. Crypto Gator haipe chero warandi (ingave inonongedza kana inongedzerwa) zvine chekuita neruzivo rwunopihwa chero Crypto Gator saiti uye / kana kushandisa kwako chero kweiyo Crypto Gator Masayiti kazhinji kana kune chero chinangwa. Crypto Gator inoratidza zvachose chero zvirevo zvinorehwa, kusanganisira asi zvisina kuganhurirwa, waranti yemusoro, kusatyora, kushambadzira kana kugwinya kwechimwe chinangwa. Crypto Gator haizove nemhosva yekurasikirwa kana kukuvara kunogona kukonzerwa nekuvharirwa nevanhu vechitatu ve chero ruzivo rwunowanikwa kwauri kuburikidza ne Crypto Gator Masites kana chero eawo. Kunyangwe iro ruzivo rwamakapihwa pane ino webhusaiti rwakawanikwa kana kurongedzwa kubva kumatunhu atinotenda kuve akavimbika, Crypto Gator hazvigone uye hazvivimbise kururamisa, kuvimbika, nguva, kana kukwana kwechero ruzivo kana data rakaitwa kuti riwanikwe kwauri kune chero chinangwa. Kunyange Crypto Gator, kana chero vamwe vayo vanobatana, vatungamiriri, maofficial kana vashandi, kana chero wechitatu bato vanopa zvemukati, software uye / kana tekinoroji (pamwe chete, iyo "Crypto Gator mapato "), anozove nemhosva kana kuve nechero mutoro werudzi chero rupi zvarwo rwekurasikirwa kana kukuvara kwaunowana kana paine kukundikana kana kukanganisa kweumwe Crypto Gator saiti, kana zvichikonzerwa nechiito kana kusiiwa kwechero rimwe bato rinobatanidzwa mukugadzira chero Crypto Gator saiti, iyo data irimo kana zvigadzirwa kana masevhisi anopiwa nekudaro unowanikwa kwauri, kana kubva kune chero chimwe chikonzero chine chekuita nekuwana kwako, kusakwanisa kuwana, kana kushandisa chero chinhu Crypto Gator saiti kana zvigadzirwa zvirimo, kunyangwe kana kwete mamiriro ezvinhu achikonzera chikonzero chakadai angave anga ari mukati mekutonga kwe Crypto Gator kana wechero mutengesi anopa software kana masevhisi.
Hapana chiitiko chinodaro Crypto Gator kana chero ipi zvayo Crypto Gator mapato anogona kuve nemhosva kwauri, kungave muchibvumirano kana kutambudzwa, kune chero yakanangana, yakakosha, isina kunangana, inokonzeresa kana yakangoitika kukuvara kana chero kumwe kukuvara kwemhando ipi neipi kunyangwe Crypto Gator kana chero rimwe bato rakadai rakarairwa nezve mukana wacho. Uku kuremerwa pamutoro kunosanganisira, asi hakuna kuganhurirwa, kutapukirwa kwechero hutachiona hunogona kukanganisa michina yemushandisi, kutadza kweanogadzira kana emagetsi michina kana mitsara yekutaurirana, nhare kana mamwe matambudziko ekubatana (semuenzaniso, haugone kuwana wako internet webasa mupi) , kuwana zvisina mvumo, kuba, kukanganisa kwevashandisi, kuramwa kana zvimwe zvinetso zvevashandi kana chero masimba makuru. Crypto Gator haigone uye haivimbise kuenderera, kusakanganiswa kana kuchengetedza kwakachengeteka kune chero ipi yeiyo Crypto Gator Sites.
Maonero ese evanyori ndee avo vega uye haaite zano rezvemari nenzira ipi neipi zvayo. Hapana chakaburitswa naCrypto Gator chinopa kurudziro yekudyara, uye chero data kana Zvemukati zvakaburitswa naCrypto Gator hazvifanirwe kuvimbwa nazvo kune chero zviitiko zvekudyara.
Crypto Gator anokurudzira zvakasimba kuti iwe uite yako yakazvimiririra yekutsvagisa uye / kana kutaura neane hunyanzvi hwekudyara nyanzvi usati waita chero sarudzo dzemari.
Humwe hukama, kusanganisira hypertext zvinongedzo, mune yedu saiti zvinokuendesa iwe kune ekunze mawebhusaiti. Izvi zvinopihwa kuti zvive nyore kwauri uye kuiswa kwechero chinongedzo hazvireve kubvumidza kana kubvumidzwa naCrypto Gator weiyo saiti yakabatana, mushandi wayo kana zvirimo. Imwe yeaya mawebhusaiti ane yavo "Mitemo uye Mamiriro." Isu hatisi ivo vane chekuita nezviri mune chero webhusaiti kunze kweiyo Crypto Gator Sites. Isu hationgorore uye hatitore basa rekutarisa zvirimo kune chero echitatu-bato mawebhusaiti.
Aya makuki anoshandiswa kuunganidza ruzivo nezve mashandisiro anoita vashanyi yedu saiti. Isu tinoshandisa ruzivo kuunganidza mishumo uye kutibatsira kuvandudza saiti. Makuki anounganidza ruzivo mune fomu risingazivikanwe, kusanganisira huwandu hwevashanyi vesaiti, uko vashanyi vauya kune saiti kubva uye iwo mapeji avakashanyira.
Nekushandisa webhusaiti yedu, unobvuma kuti tinogona kuisa aya marudzi emakuki pane chako kifaa.
Mitemo neMitemo uye chibvumirano chakaumbwa pano ("Chibvumirano") chinodzorwa, nekufungidzirwa uye kumanikidzwa maererano nemitemo yeProvince yeBritish Columbia, Canada, zvisineyi nekukonana kwemitemo. Kunze kwekunge zvakabvumiranwa neimwe nzira zvakanyorwa newe nesu, gakava ripi neripi rinobva kana rine chekuita nechibvumirano, kana kutyora apa, rinozopedziswa nekugadziriswa kunoitwa neCanada Arbitration Association pasi pemitemo yayo yeCommerce Arbitration Mitemo, kana mutumbi wekutonga wakadai panodiwa nemutemo, mutemo kana murau, uye mutongo pamubhadharo wakapihwa nemuyananisi unogona kupinzwa mune chero dare rine hutongi. Arbitration ichaitwa mururimi rweChirungu pamberi pemutevedzeri mumwechete muGuta reVancouver, British Columbia, Canada. Kubvumirana kwakadaro kunofanira kutanga mukati megore rimwe (1) mushure mekukumbira kana chikonzero chekuita. Kana paine chikonzero chero kupi zvako kupihwa kwechibvumirano ichi, kana chikamu chayo, chisingazogone kushanda, kupihwa uku kuchamanikidzwa kusvika pamwero unobvumirwa kuitira kuzadzisa chinangwa chechibvumirano ichi, uye chisara chechibvumirano ichi chichaenderera musimba zvizere uye mhedzisiro. Chibvumirano ichi chinobata chibvumirano chose pakati pedu newe nekuremekedza maCrypto Gator Sites uye chinodzvinyirira ese ekutanga kana epamhepo kutaurirana, zvibvumirano uye kunzwisisana pakati pedu newe zvine chekuita nenyaya iri pano. Shanduro yakadhindwa yechibvumirano ichi ichave inogamuchirwa mumatare edzimhosva kana ehutongi.
Chero kodzero dzisina kupihwa pachena pano dzakachengetedzwa.
© 2020 eBargains Nhasi Online Chitoro LTD.
Yakagadziridzwa muna Gumiguru 1, 2020